Posted in xad la'aan . Space dhammaadka lahayn . gariirka . caalamka . bannaan . объекты . dhacaya
gariirka way kala duwan yihiin. gariirka, soo jireenka ah si gooni gooni ah loo qaaday shay, halkii kuusasho. Dhammaan walxaha, birqaya la isku inta jeer, Iyagu waa qayb muhiim ah bannaan inta jeer gariirka loo doortay. inta jeer gariirka Space la doortay wuxuu ka kooban yahay walxo ama walxaha birqaya at inta jeer this.
vibrations soo jireenka ah ruxruxo guryaha. The gariirka ee mawjadaha sare leeyihiin Milanello hoose, sidaas ay awoodaan in ay soo dhex gariirka low-soo noqnoqoshada, doodida iyo u daawado. Oo, this dhici karaan kuwo dareemi u-soo noqnoqoshada hooseeyo. Sayidka waxaa xalin su'aasha ah aragti. Waayo, ku dhaqanka ee dambe loo diido: gariirka ee hirka Low ma ay awoodaan in ay galaan iyo inay xajiyaan hirka sare. By Samo falku waxa gariirka mawjadaha ugu sareeya si xor ah meel walba waa, iyo xataa meesha bannaan ee ka mid ah mawjadaha hooseeya, halka inta soo hartay arrin dareemi.
Caalamka, taas oo dadka loogu bixiyey xaalada tartanka horumarka a, waxaa ku qoran tusaalooyinka dhulkeena joogto ah. Oo kulligoodna waxaa lagu xukumay failure, Waayo, qaab ma guurto ma awoodo inuu u dhaqaaqo in ay horumarinta, oo sidaas horumarka.
Cku saabsankadiyoniyowaa ku saabsanbbwaasi ay utku saabsanin.
In si loo abuuro shay ku filan si aad u sameysato set ku haboon ee gariirka iyo qaab-dhismeedka macluumaadka. Waxyaabaha noqon kartaa kala duwan ayay u hoosaysaa- iyo inta jeer sare.
Caalamka gariirka waxgarashada waxa loo arki karaa dhacdo dhaca midige markabka ayaa inta lagu jiro duufaan. Kooxda ayaa la badmaax ee doonnida ma awoodi doonaan in, dhaqaaqin in wareegga isla, Waa markab kale. All maraakiibta, guurin isku mid waqtiga, Waxaa loo arki karaa Caalamka kala duwan, birqaya at inta jeer ee isku, oo More – sida weelka Dhammaan Caalamka, kuwaas oo. Laakiin tani waa kaliya model ah waxgarashada, maxaa yeelay, doonniyihii waxyeelo shil, iyo Caalamka dhabta ah, birqaya at firikuwensiyada kala duwan, ma isku.
qaraabo xoog cabirka.
vibrations waa ay awoodaan in ay ku isticmaali on kasta oo saameyn kale oo qaraabo. Oo xooggii Kan sida saamayn dhigma in ka mid ah saamaynta cabbirka kala duwan ee midba midka kale. Si loo fahmo eegno arrin fiican at tusaale dhab ah relativity.
shay, oo ku yaalla dunida oo saddex geesood ah uu awoodo in uu ku tuuray hoosku, taas oo waa shay dunida laba dhinac-cabbir ah. Sida shayga saddex geesood ah oo saamayn ku hooska dhibicda (hooska on shayga), taagan ee soo socota si ay u cabiraada saamayn kasta oo kale oo. In si kale loo dhigo, wax kasta oo nižestoâŝee cabiraada – hooskii sare. Taasi waa, meel bannaan oo ka mid ah inta jeer ee uu hooseeyo – hooskii, meel by Frequency sare tuuray.
Aan la rabin gariirka low-soo noqnoqoshada nuugi karaa, haddii shayga ama shaqeeyo ku xiran tahay saameynta ay. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan miyir diidmada la xiriira saamaynta ay suurto gal.
gariirka Dhererka (inta jeer iyo xoog labadaba) weheliyay dareen farxad iyo dhaqdhaqaaqa dhabta ah ee guud ahaan Up tamarta. gariirka hoos u weheliyay dareen ah murugo iyo hilowga, Energy iyo dhaqdhaqaaqa dhabta ah hoos. Tan waxaa loo fududeeyey karo ma aha oo kaliya dhacdooyinka nolosha, laakiin caadiga ah kartiyeed walxuhu muusikada. Waxaad u baahan tahay inaad ka taxadartaa ood Dhawrsataan, maxaa yeelay, weerarka waa in dhammaan noocyada kala duwan ee tallaabooyin karin. Gariirka waa xoojisay iyo is ahaantii isu muujiyay karaa noocyo kala duwan.
Sida shey kasta, The xiddigaha iyo meerayaasha ku jiraan xaalad ah gariirka, taas oo la kordhin karaa hoos qaarkood saamayn ku xaaladaha. On aag gooni ah oo saamayn of Cosmos ee yeelan karaan meerayaasha badan iyo / ama Stars markeeda ama isku mar. Kuna, in nugul Saamaynta ugu weyn ee noolaha horumariyo karo ama hawlaha kale. Sida sayniska ee saamaynta gariirka kala duwan nooca loo yaqaan cilmi falaga, kaas oo lagu jees jeesay pseudoscientists iyo dambiilayaasha ee heerarka kala duwan, isu qori darajo sayniska iyo naftooda naadisaan saynisyahano iyo nimankii xigmadda. falaga – sayniska, in uu ka baxsan xadka fahamka Ashkhaas horumaray iyo dhacsan hooseeyo, sababtoo ah waxaa jira caalamka qaar ka mid ah Naxariis ilaahyadii. Marka ay dhacdo noocaas ah qaadataa meel – “khasnad ka sarraysa” dhaqso in ay qaataan ay gacanta ku hayaan ee dilaaga ugu xun, iyo, haddii macluumaadka xaday, laftiisa sayniska ha samaynina wax hubaal ah oo aan la taaban. Waa xayawaan ugu horumarsan, mana baajiyo gaar ah qasbi si ay u qiimeeyaan in ay run awood. Inkastoo ay jiraan oo awood badan, laakiin sayniska yar la fahmi karo. sheegistii All been xamaarato waa in la hoos geliyey in ay maxaabiis ahaan a caadiga ah.
Rabo si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah iyo in si qoto dheer macluumaad tagi kartaa University Space.
Dhismaha Burburinta isfeerada “buro kansar” dhameystirtay, waxa oo dhan iyo hambalyo. Waxaa la joogaa waqtigii si ay u bilaabaan marxaladda jirka “dhammaadka adduunka”. “Yaa lahaa mid ka mid ah iyo cunay.” Sim qabaa qudbaddiisii ​​ugu dambeeyey dhameystirtay. Aamiin.
꙳ ᴥ ꙳ ᴥ ꙳ ᴥ gitaarka – Seeds Magic ᴥ ꙳ ᴥ ꙳ ᴥ ꙳
~ "* ° • ☸ Jiritaanka – Palace of dabaylaha ☸ • ° * "~